Aubameyang iyo Omagbemi oo kali ah ayaa Afrika ka soo galay liiska tartanka abaalmarinta Fifa - BBC Somali
Weerar yahanka reer Gabon Pierre-Emerick Aubameyang iyo Florence Omagbemi oo ah tababaraha kooxda kubadda cagta Nigeria ayaa noqday labada ruux ee kali ah ee soo galay liiska dadka u tartami doona abaalmarinta sannad laha ah ee Fifa.
Aubameyang ayaa loo doortay in uu ka mid noqdo 24ka ciyaaartoy ee u tartama abaalmarinta Fifa ee ciyaaryahanka ugu wanaagsan kubadda cagta ragga.
27 jirkan ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu gool dhalinta badnaa koobka Bundesliga ee xiliciyaareedkii hore, isaga oo 31 u dhaliyay Borussia Dortmund.
Omagbemi ayaa iyaduna dhankeeda koobkii siddeedaad ee heer qaaradeed ah u qaaday dalka Nigeria, waxayna ka mid tahay tobanka tababare ee Fifa ay u xushay in ay u tartamaan abaalmarina tababaraha ugu wanaagsan ee dumarka.
Tababareyaasha raga ah kuma jiro qof qaaradda Afrika laga soo xulay.
Dadka ku guulaysta abaalmarinnadan kala duwan waxaa lagaga dhawaaqi doonaa xalfad lagu qaban doono magaalada London 23 bisha Oktoobar.
Khuburo labo guddi ah oo ka kala socda lixda xiriir ee kubadda cagta ayaa dooran doona dadkii ugu wanaagsanaa xiliciyaareedkii tagay ee 2016-17.
Image caption Florence Omagbemi
Dadka isugu soo haray tartanka abaalmarinta Fifa ee ciyaaryahanka ugu wanaagsan ragga:
Dumarka isugu soo haray tartanka abaalmarinta Fifa ee haweenayda ugu tababar fiican
Olivier Echouafni (France, Xulka qaranka France)
Nils Nielsen (Denmark, Xulka qaranka Denmark)
Florence Omagbemi (Nigeria, Xulka qaranka Nigerian)
Dominik Thalhammer (Austria, Xulka qaranka Austrian )
Sarina Wiegman (Netherlands, Xulka qaranka Netherlands )
Hwang Yong-Bong (North Korea, xulka qaranka Kuriyada Koonfureed iyo kooxda ay da'doodu ka hoosayso).